SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO : Polisy miisa roa tratra nanao kolikoly
Hentitra ny eo anivon’ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny amin’ny ady amin’ny kolikoly na amin’ny sehatra inona izany na inona. 17 octobre 2019
Toy ny tompon’andraikitra sasany eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato izao hatramin’izay dia fantatra fa nalaza ratsy tamin’ny fampanjakazakana ny kolikoly amin’ny endriny maro samihafa izay ahazoana fitarainana matetika. Raha ny loharanom-baovao voaray omaly teo am-panoratana ny lahatsoratra mahakasika ny raharaha dia voalaza fa Polisy miisa roa amin’izao fotoana izao no sarona nanao kolikoly nandritra ny fanadihadiana lalina natao.
Marihina moa fa herinandro taorian’ny fitsidihana tampoka nataon’ny Filoham-pirenena teny an-toerana dia nandeha ny famotorana lalina ka nahatratrarana ireto polisy ireto izay efa nampitaraina ny maro hatramin’ ny ela. Efa mampitandrina sahady izay mbola mikasa hampanjaka izany hatrany moa ny fitondram-panjakana fa tsy ijerena tavan’olona ny fikarohana fa izay tratra mandika lalàna dia mibaby ny sazy sahaza azy avokoa.